ဗလာကောင်းကင် | ပြည့်စုံ
ကဗျာလေးနဲ့အတူ ထပ်တူထပ်မျှ ခံစားရတယ် ကိုပြည့်စုံရေ
တခါတလေမှာ တချို့ပုစ္ဆာတွေက အဖြေမရှိကြဘူး
အတင်း အဖြေထုတ်လိုက်တော့ အဲ့အဖြေဟာ မေးခွန်းတွေ အသွင်ပြောင်းသွားပီး နှလုံးသားကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် လာရိုက်ခတ်တော့တာပဲ
တုံ့ပြန်မှုတိုင်း တန်ပြန်သက်ရောက်မှုရှိရမယ်ဆိုတဲ့ နိယာမကြီးကို အတည်မှတ်မထားသင့်ဘူး အကိုရေ
ကဗျာလေးမှာနှမြောတ သမှုတွေ... အလွမ်းတွေနဲ့.... ချစ်သူကိုတန်ဘိုးထားချစ်တတ်သူ တစ်ယောက်ရဲ့ ခံစားချက်လေးကို မျှဝေခံစားသွားပါတယ်
ကဗျာလေး ဖတ်ပြီး တမျိုးလေး ခံစားလိုက်ရတယ် ကိုပြည့်စုံရေ
လူကြမ်းကြီး အသဲကွဲတော့ယုံမှာလားးးး တဲ့။
အနော် အပေါ်မှာပြောခဲ့သလိုပဲ တစ်ချို့ ပုစ္ဆာတွေက အဖြေမရှိပဲ မေးခွန်းတွေသာ လှည့်ပြောင်းတတ်တယ်။
ဥပမာဗျာ။ သုညရမဲ့ အဖြေပုစ္ဆာ အတွက် ခေါင်းခြောက်ခံပြီး တမေ့တမော တွက်ခဲ့ဖူးသလိုပေါ့။ နောက်ဆုံးတော့လဲ သုညက အဖြေပေါ့။
ကဲ လူကြမ်းကြီး သဘောပေါက်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ သုည ရအောင် တွက်ယူနေတယ်လို့ သဘောထားလိုက်။ ပျော်အောင်နေ။ ချင်းတောင်းလေးတို့ လို မောင်နှမတွေ၊ ဘလော့ဂါ သူငယ်ချင်းတွေ အများကြီးရှိတယ်လေ။ နွဲ့ ပြနဲ့နော်။ လက်သီးစာကျွေးပစ်မယ် ဘာမှတ်နေလဲ။
ချင်းတောင်းလေးလို နေတတ်အောင် နေစမ်းပါဗျာ။
ရည်းစားဦးတောင် ကလေးအဖေဖြစ်နေပြီ။ ပျော်တုန်းပါးတုန်း တို့ ကတော့။ ဟုတ်ဘူးလား။
ပျော်ပျော်နေ သေခဲ။ မော်တော်တွေရေထဲ။ ကဲကဲ ပြုံးပြစမ်းပါ လူကြမ်းကြီးရယ်။။။။ ဗြဲ ဟဲဟဲ
ညစ်နေရင် အွန်လိုင်းတက်လာခဲ့ ပိုညစ်သွားအောင် သီချင်းဆိုပြမယ်။ ဟဟားးးးးးးးးးးးး
အဲဒီ လ ကလေး သာနေဖို့ပဲ ဆုတောင်းဖြစ်တာ
ပေးဆပ်သူတွေရဲ့ ဘ၀နဲ့ခံစားချက်ပါပဲ မောင်လေးရေ..
ကံကြမ္မာ သာ မျက်နှာသာပေးခဲ့ရင်တော့
ကိုယ့်ကောင်းကင်မှာ ဟုတ်ချင်မှ ဟုတ်ပေမယ့် သူသာတဲ့အခါ ပြည့်ဝအောင် သာနိုင်ပါစေလို့ ဆန္ဒပြုလိုက်ပါ သယ်ရင်းရေ။ ဘယ်အရာမှ မမြဲဘူးနော်။ အလင်းနဲ့ အမှောင် နေ့နဲ့ည အရှေ့နဲ့အနောက် တလှည့်စီပဲ ။ သန်းခေါင်ထက် ညဉ့်မနက်ဘူးသယ်ရင်း ။ ဒါပေမယ့် သန်းခေါင်ချိန်ကပဲ ရောင်နီလာဖို့ အနီးဆုံးအချိန်ဖြစ်တယ်။ တို့တွေ မောင်နှမတွေ သယ်ရင်းတွေ ရှိတယ်။ နင် လွတ်လွတ်လပ်လပ်ရင်ဖွင့်အန်ချလိုက်စရာ ဘလော့အိမ်ကလေး ရှိတယ်။ အဲဒါတွေကို လာနားထောင်ပေးမယ့်သူရှိတယ်။ ပြီးတော့ နင့်ကို ချစ်နေတဲ့ သူတွေ ရှိတယ် ။ ပျော်ရတဲ့နေ့တွေ ရှိသေးပါတယ် ။ကြုံရမှာပါ။
နင့်နဲစွာ ခံစားခဲ့ရတဲ့ ဟောဒီ့ ရင်ဘတ်ကြီးတစ်ခုလုံးနဲ့ကို ခံစားသွားတယ်နော်......။
ကဗျာတွေ စာတွေ အများကြီးရေးနိုင်ပါစေနော်...။
ခင်မင်မှု အမြှောက်တစ်သိန်းးD
လွမ်းနေ ဆွေးနေတာလား ကိုပြည့်စုံ ရေ ..
လောကကြီးမှာ ဘယ်အရာမှ မတည်မြဲ ပါဘူး ။
အကောင်းနဲ့ အဆိုး အမြဲ ဒွန်တွဲနေတာမို့ 
အလွမ်း အဆွေး ချည်းနဲ့သာ ရှိနေမှာ မဟုတ်ဖူးလေ
ပျော်စရာတွေလည်း တလှည့်ရောက်အုံးမှာပေါ့ ...
ကဗျာထဲမှာ အချစ်တွေနဲ့ကြည်မွေ့ နေတာ မြင်
မညီညာမှုတွေ ဟာ အမြဲ နာကျင်စရာကောင်းပါ
တယ် အချစ်ဟာ နာကျင်နေသည့်တိုင် လွမ်းနေ
ရင်းနဲ့ ချစ်နိုင်သေးတာမို့ချစ်နေရင်းနဲ့ သာ
အခု အမှန်ကိုသိလို့ အမှားပြင်လိုက်ရုံပေါ့
ကဗျာလေးသိပ်ကောင်းတယ်။ တော်တော်လေးခံစားပြီးရေးဖွဲ့ထားတာပဲ။ ဒီလိုပဲ ကိုပြည့်စုံရေ..တစ်ခါတစ်လေကျရင် လက်တွဲမြဲမယ်ထင်ထားတဲ့ အရာတွေက မထင်မှတ်တဲ့ ကံကြမ္မာက ၀င်ရောက်ကျီစယ်တတ်တယ်နော့။ အဆင်ပြေ ပျော်ရွှင်ပါစေ။
ဘယ်နေရာကြေပြီး၊ ဘယ်နေရာကွဲနေလဲ ဖွားကိကိုသာ ပြော သူကအချုပ်အလုပ်တော်တယ်း)
မငုံပြီးရင် မနမ်းပဲ အမြဲတမ်းနောက်ဆုံးကလေး)
ကိုရင် ပြည့်စုံလား။ တော်တယ်နော်။
ကိုပြည့်စုံရေ ကဗျာလေးကို ထပ်တူခံစားသွားပါတယ်. လမင်းလေးက ဘယ်မှာပဲသာနေနေ လမိုက်နေတာကိုမြင်ရတာထက်စာရင်တော့ လမင်းလေးအတွက် ၀မ်းသာပေးလိုက်ပါ လူတိုင်းကြုံဖူးတဲ့အရာတခုမို့ ကိုယ်ချင်းလဲစာပါတယ်။
ကိုပြည့်စုံရေ...တွေ့ ကြုံဆုံကွဲဟာ ဓမ္မတာလို့ မှတ်ရင် ဖြေသာမယ် ထင်ပါတယ်နော်။.
ညီလေး ပြည့်စုံ အချစ်ကြောင့် အကွဲတွေသည်းနေတယ်ပေါ့။ ငှက်ကလေး ပျံလို့ကိုင်းဖျားလေး လှုပ်ခတ်သွားပြီးနောက် ။ နောင်လည်း ငှက်ကလေးတွေ ခိုနားဦးမှာပါ။ မောင့်အရိုင်းပန်း။
ဖတ်လို့ ကောင်းတယ် အကိုရး)